बिन्दु परियारले पुर्वपति विरुद्धको मुद्दा जितिन्, रु. ७२ करोड क्षतिपूर्ति पाउने – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
समाचार अनुसार बिन्दु एक बर्षकि हुँदा टम सेवलले उनकै सानि आमासंग बिवाह गरेको थियो । उसले बिन्दुलाइ बच्चै बेला देखि आँखा लगाएको र उनको प्राइभेट स्कुलमा पढ्न फि पानि तिरिदिएको थियो । बिन्दुले टमकै पैसाले १२ कक्षा सम्म पढेकि थिइन । टमले बिन्दुको सानिआमासंग १२ बर्ष बसे पछि डिभोर्स गरेको थियो । त्यस पछि उसले बिन्दुकि दिदि पर्ने सिता परियारसंग बिवाह गर्यो । १७ बर्षकि सिता परियारलाइ टमले स्वास्नि बनाएर अमेरिका लगे पछि क्लबमा नचाउन थाल्यो ।
सन २००८ मा सितासंग डिभोर्स गरेर टमले बिन्दुलाइ बिहे गरेको थियो । उसले बिन्दुलाइ अमेरिकामा पढाउने सपना देखाएर बिहे गरेर ल्याए पनि शुरु देखिनै स्ट्रिप क्लबमा नचाउने र बेश्याब्रितिमा लगाउन थालेको घियो । अमेरिका आएर राम्रो जिवन जिउने सपना देखेकि बिन्दुलाइ टमले बन्धक जस्तै बनाएर ट्रिप क्लबमा नचाउने गरेको उनि बताउँछिन । बिन्दुले बिरोध गरे उसले अमेरिका ल्याउँदा र पढाउदा लागेको खर्च भनेर अमेरिकि डलर ५०,००० मागेको र नदिए ज्यान मार्ने धम्कि पनि दिएको बिन्दुले बताएकि थिइन ।
टमले बिन्दुलाइ लागु औषध र रक्सि खुवाएर बिभिन्न ग्रहाकहरु संग सुत्न लागाउँथ्यो र भिडियो खिच्ने गर्थ्यो । बिन्दुले ति ग्रहाक हरुको बारेमा र उनिहरुले तिरेको पैसाको खाता फेला पारे पछि मात्रै उनिहरुले पैसा तिरेको थाहा पाएकि थिइन । उनले अदालतमा पेश गरेको सो खातामा साठिजना भन्दा बढि ग्राहकहरुका नाम हरु थिए । बिन्दु नभागोस भनेर पासपोर्ट र इमिग्रेसन कागजात पनि लुकाइदिएको बिन्दुले बताएकि थिइन । सन २०१२ मा मोन्टाना बाट डेल्लास बसाइ सराइ गरे पछि बिन्दुले त्याहाँको बेबि डल्स स्ट्रिप क्लबमा नाच्न थालेकि थिइन ।
एक दिन बिन्दुले थप ग्राहक संग जान नमाने पछि भएको झगडाका कारण पुलिस केस पनि भएको र प्रहरिले मानब ओसारपसारको केसमा अनुसन्धान पनि गरेको थियो । टमले अप्रिल २०१२ देखि दुइ बर्ष सम्मको प्रोबेसनको सजाय हालै मात्र पुरा गरेको थियो । सोहि बेला देखि बिन्दु टमको चंगुल बाट फुत्केकि हुन । त्यस पछि टमले बिन्दुलाइ बेश्या भएको भन्दै बिभिन्न अनलाइन माध्याममा फोटो र भिडियो पठाएर उनको बारेमा लेख्न अनुरोध गर्न थालेको हो । टमकै प्रयासमा बिन्दुको बारेमा कान्तिपुर पब्लिकेसनको साप्ताहिकमा कभर स्टोरि पनि छापिएको थियो ।
अदालतले ठुलै रकम क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने फैसाला गरे पनि बिन्दुलाइ टमले पैसा तिर्ला भन्ने बिश्वास भने छैन । अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसाला गरेको मा नै उनि खुशि छिन ।
उनि भन्छिन, “म बल्लियो छु भन्ने देखाउन चाहेकि थिएँ ।”
← शुभद्रा अधिकारि बिरामि सरकारले खर्च बेहोर्ने
बाल्यकालमा १३ चर्चित नेपालि कलाकारहरु कस्ता थिए ? →